RW CABDIWALI oo sheegay in maamul goboleed loo dhisayo 3-da gobal - Caasimada Online
Home Warar RW CABDIWALI oo sheegay in maamul goboleed loo dhisayo 3-da gobal
RW CABDIWALI oo sheegay in maamul goboleed loo dhisayo 3-da gobal
Muqdisho (Caasimada Online) – Sidda ay baahisay Idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho, ra’iisal wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in maamul gobaleed loo dhisi doono gobalada Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Idaacadan maxaliga ah ayaa sheegtay in ay heshay war-qad ka soo baxday xafiiska ra’iisal wasaaraha, taasoo la sheegayo in ra’iisal wasaaraha uu doonayo in maamul gobaleed loo dhiso seddaxda gobal ee Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Ra’iisal wasaaraha waxaa kaloo uu ku baaqay in dhinacyada isku haya Beydhabo in ay joojiyaan xiisada ay ka wadaan halakas isla markaana cid kasta oo qas abuurta lala xisaabtamo doono sidda uu sheegay ra’iisal wasaaraha.
Ra’iisal wasaare Cabdiweli ayaa waxaa kaloo uu amar ku bixiyay in ciidamada ammaanka ee ku sugan Beydhabo ay gacan bir ah ku qabtaan ammaanka magaalada isla markaana ay badibaadiyaan dadka shacabka ah iyo siyaasiyiinta.
Ra’iisal wasaaraha waxaa kaloo uu hoosta ka xariiqay in barnaamijka lagu dhisaayo maamulka seddaxda gobal in uu kala kaashan doono guddoomiyaha golaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari.
Ugu dambeyn warqada ka soo baxday xafiiska ra’iisal wasaaraha ayaa loogu baaqay beesha caalamka in ay taageerto qorsha uu wado ra’iisal wasaaraha ee la doonayo in maamul loogu dhiso seddaxda gobal ee kala ah Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Si kastaba, magaalada Beydhabo waxaa maalintii 3-aad ka taagan xiisad ka dhalatay imaatinka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo u ololeenayo dhismaha maamul seddax gobal ka kooban.